मस्कोमा स्विमिंग पोखरीमा होटलहरू
स्पोर्ट्स क्लब "फिटनेस"
Nakhabino को मूल रिंग रोडको मस्को मस्को रिंग रोडबाट, एक अद्वितीय रिसोर्ट जटिल बनायो। अभिप्रेत उपनगरीय वन मा, 1 18 प्वाल क्षेत्र सिर्जना गरिएको थियो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय टहरूमेन्ट को आवश्यकता पूरा गर्दछ। जहाँसम्म, गल्फ सबै होईन जुन पाहुनाहरूलाई आकर्षित गर्दछ।
वनहरू र तालहरू बीच 120 हेक्टरहरूको क्षेत्रमा पाँच-हेक्टर क्षेत्रहरूमा पाँच-स्टार जटिल र फ्लाइटहरू र टाउँलाहरू, विशाल खेल परिसरहरू अवस्थित छन्। ठूला, चहकिलो कुटीहरू काठबाट बनेका छन् केवल समाप्त भएमा वातावरणीय मैत्री सामग्री प्रयोग गरेर।
प्रत्येक सौणपत्र र फायरप्लेस, पार्भिल फ्लोरहरू, एक आधुनिक भान्छाको साथ सबै आवश्यक बेडरूम, आरामदायक बेड कोठाहरू। प्रत्येक घरको छेउमा एक सानो आरामदायक प्लट, एक बार्बेक्यु क्षेत्र, पार्किंग स्थल हो। उही सिद्धान्त द्वारा, टाउनहाउस सुसज्जित र स्थित छ।
प्रत्येकको क्षेत्र 114 वर्ग मिटर हो। जसले सहरी जीवन शैली र आरामको स्तरलाई प्राथमिकता दिन्छ, प्रकृतिमा पनि, कोठामा आरामदायक हुनेछ। प्राकृतिक काठ, आधुनिक प्रविधिको रूपमा फर्निचर, विन्डोजबाट अद्भुत दृश्यहरू, केही कोठामा तातो टबहरू - यसका सबैले तपाईंलाई लक्जरी र मौनताको वातावरणमा मनोरन्जन गर्न अनुमति दिन्छन्।
पूलका सबै अतिथिहरू आरोपमा आरोपमा प्रदान गरिएको सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखलाका साथ प्रदान गरिएको छ, थाई रेबान कार्यक्रमहरू र विभिन्न प्रकारका मसाजहरू प्रदान गर्दै।
थप, त्यहाँ एक खेल जटिल छ, जसले गर्मी र जाडो खेलको लागि खुला खेल मैदानहरू, समग्र स्नान सामग्री, सम्पूर्ण स्नान जटिल, एक पूरै स्नान परिसर र पेशा हलनेस फिटनेस।
<< p> न्यानो मौसममा, सूर्य टेरेसको साथ एक बाहिरी पोखरी सञ्चालन भइरहेको छ। बच्चाहरूको लागि विशेष खेल कार्यक्रमहरू विकास भइसकेको छ, गल्फ कोर्स सिक्न सहित, पौंडी, टेनिस।
कुनै पनि समयमा तपाइँ खेल उपकरण, साइकल, स्केट, रोलर, डु boat ्गा, डु boats ्गा र इलेक्ट्रोकरहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ durs रेस्टुरेन्टहरू छन् र क्लबमा paran बारहरू छन्। यहाँ तपाईंले लेखकका भाँडाहरू भेट्टाउनुहुनेछ, शेफहरू र युरोपेली खानाबाट। बार र क्याफेहरू - पेय पदार्थ, ककटेल र हल्का खाजामा।
स्पोर्ट्स क्लब हेलनेमेनम्यान: 00: 00 देखि 00:00 देखि: 00:00 देखि: 00: 00 सम्म हप्ताहरू / LI>
अतिथि "जहिले पनि हप्तामा 1:00:00 देखि 1:00:00 देखि 1:00 देखि 1:00 देखि 1 on0 सम्ममा (1 17 घण्टा सम्म) मा र 1 17 घण्टा सम्म साँझ) - r00 रूबलहरू। / LI>
JOBSES अतिथि अर्को समयमा क्लब द्वारा भाग लिन सकिन्छ (1 17:00 पछि, भ्रमणको मूल्य 1.0रूबलहरू हो। / LI>
अतिथिको सेवाको पंजीकरणले ज्योतिस अतिथि कार्ड र राहदानीको प्रस्तुतीकरणमा सेवा परामर्शदाता ऑनसीको र्याकमा हुन्छ। / LI>
चेक नगद नगद क्यास वा गैर-नगद भुक्तानीमा भुक्तान गरिएको छ जुन सेवा परामर्शदाता द्वारा डिस्चार्ज गरिएको छ। / LI>
अतिथि भ्रमण सेवाहरूको भुक्तानी पछि, सेवा परामर्शदाताहरूले एक कपाटमा (एक कुञ्जीको रूपमा काम गर्दछ। / LI>
ORTROR को लागी owterweear, छिमेकी विन्डो अतिथिले तौलिएको सेट प्राप्त गर्दछ, पाहुनाले सुरक्षित सेल प्रयोग गर्न सक्दछन्। / LI>
कक्षा पछि, पाहुनले लॉकरी बास्केटमा तौलिया छोडे, बाकीले सेवा परामर्शदाताहरूमा फर्कन्छन्। / LI> <
अतिथि भ्रमण एक सेवा हो जुन तपाईंलाई क्लबका सबै सेवाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ: सौना, टर्की, समूह प्रोग्राम हलहरू, जिम, जिम क्लब।
पूँजीमा गइरहेको छ र झ्याल भित्रको पौंडी पोखरीको साथ होटलमा जानुहोस्? त्यसोभए तपाईं पक्कै पनि "क्रोन होटेललाई" मन पराउनुहुनेछ! कोठामा सौनाको साथ हाम्रो होटेल तपाईंलाई आरामदायी कोठा र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको साथ खुशी हुनेछ। यो मेट्रो स्टेशनको नजिक अवस्थित छ "नदी स्टेशन" र helrettytyeevo एयरपोर्ट - जुन निस्सन्देह त्यस्तो मस्कोलिसको एक फाइदा छ।
कोठा मा एक चुजीजी र पोखरी को उपस्थिति कुनै पनि होटल को घमण्ड गर्न सक्दैन। हामी यसका लागि प्रशस्त अवसरहरू प्रस्ताव गर्दछौं जसले यो ठूलो पैसाको लागि अधिक मात्रामा बढ्न चाहँदैन। हाम्रो होटलमा जेकजीजीको साथ, एक अद्भुत क्याफे-पट्टीले काम गरिरहेको छ, जहाँ तपाईं स्वादिष्ट खजाना, डिइन र खाना खान सक्नुहुन्छ।
क्रममा हामी तपाईको आगमन दिनमा स्वतन्त्र ठाउँहरू हुनेछौं कि छैन, अनलाइन कोठा - यो धेरै सुविधाजनक छ!
सबै कोठा व्यक्तिगत रूपमा सजावट र आकर्षक देखिन्छ। तिनीहरूसँग सबै चीज छ जुन तपाईंलाई थकित यात्री चाहिएको छ तपाईंको शक्तिलाई छिटो पुनःस्थापना गर्न।
"Kron होटल" छुट्टिको लागि समर्पित र सप्ताहन्तमा समर्पित अर्को संख्या हो! तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा सम्बन्धित साबनको साथ मितिमा रहन सक्नुहुन्छ।
<< p> कोठामा पोखरीको साथ हाम्रो होटेलमा विभिन्न कोटीहरूको2counts कोठा छन्। ती मध्ये तीनजनाको पौडी खेल्ने पोखरी, जामुजी र सौना छ। बाँकी कोठाहरू (कक्षाको अर्थव्यवस्था "," मानक "," काउनी सुइट "," सुइट ") आराधना गर्नुहोस्। नि: शुल्क "WI-Fi" साइटमा उपलब्ध छ, त्यहाँ केबल टिभी र पार्किंग छ, जुन घडी भिडियो निगरानी अन्तर्गत अवस्थित छ।
यदि तपाईं हाम्रो होटलमा जालुजीसँगै कोठामा बस्न चाहनुहुन्छ भने, प्रीमियम सुइट "इजिप्ट", प्रिइन्सियम सुइट ", प्रिइन्सियल सुइट" ग्रीस "। यी 35 35 वर्ग मिटरको क्षेत्रको साथ उत्तम कोठाहरू हुन्। M, s0 वर्ग मीटर। M, 600 वर्ग मीटर। M, क्रमशः। मिश्री प्रीमियम लक्जरी पुरानो मिश्री मन्दिर र पिरामिडहरूको शैलीमा बनेको उत्कृष्ट समाप्त हुनेछ। कोठामा पूल र सौना छ।
यदि तपाईंलाई प्राचीन ग्रीसको संस्कृति अधिक मनपर्यो भने, त्यसपछि राष्ट्रपति सुइट "ग्रीस" तपाईंलाई उदासीन छैन। नुहाउनु पर्ने शैलीमा सजाइएको पौडी खेल्ने पोखरी र एक आरामदायक सौना आवश्यक छ तपाईंको छुट्टीको साथ जाँच गर्नुहोस्!
को एक नम्बर मध्ये एकमा आराम गर्नुहोस् "होटल CZK! हामी तपाईको आरामदायक र रमाईलो गर्न को लागी सबै कुरा गर्नेछौं!